Gegada Diyaaradaha Haa Maya Diyaarad Maya Tareenka Haa Maya Tareen Maya Ma Bad Haa Haa Ferry | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir67 ZonguldakMa jiro garoon diyaaradeed Ma jiro garoon diyaaradeed Ma jirto tareen Ma jiro tareen
18 / 03 / 2019 67 Zonguldak, GUUD, Garoomada, Gobolka Banaadir, WADADA, Headline, TURKEY
Ma jirto tareen aan jirin tareeno Ma jirto tareen halkaas ah
20 ayaa Germany ka dhigtay dusha kaliya ee loogu talagalay Madaarka Caycuma, kaas oo furay dhowr sano ka hor. Yavuzyilmaz CHP, shirkadda Jarmalka ka dib markii ay ka baxday safarkeeda, "Madaarka diyaarad ma leh, jid tareen oo aan lahayn tareen, mana jirto badda" ayuu yidhi.
Madaarka Zonguldak Chaycuma, oo laga furay 1999 oo leh awood sanadle ah oo hal kun oo rakaab ah, ayaa u duulay Dusseldorf, Jarmalka, ma jirin duulimaad gudaha ah. Haddii muwaadin rabo in uu tago Istanbul diyaarad, waa inuu u duulaa Jarmalka iyo ka dibna Istanbul, iyo wadarta masaafo dhan wuxuu ahaa 500 kun 4. Marka hawada Jarmalka u duuleysa Zonguldak ayaa kacday, dhammaan duulimaadyada ayaa dhammaaday.
"Maxay tahay sababta 17 loo furay sanado badan?
SözcüSida laga soo xigtay wargayska, '' Caycuma Airport, oo noqotay hawo gaaban oo isku dayaysa in uu soo nooleeyo. Maamulaha Madaarka Zonguldak Hasan Özshahin, "Diyaargarowga duullimaadka gudaha ayaa bilaabmay," ayuu yiri. Ku xigeenka CHP Ku xigeenka Zonguldak Deniz Yavuzyilmaz ayaa hadal uu soo saaray ku yiri, "Caqabadda kaliya ee horay loo maro duulimaadka, awoodda ah in lagu hayo Zonguldak. 17 ma aysan awoodin inay billaabaan duulimaadyo sanado badan. Xaaladda Zonguldak xaalkeedu waa mid naxdin leh. Ma jirto garoonka diyaaradaha, diyaaradna ma leh, baddana ma jirto, mana jirin doonni tareen, jid tareen oo aan lahayn tareen. "
Yavuzyılmaz ayaa sheegay in qalabka ILS ee garoonka diyaaradaha iyo noocyada dayuuradaha ee ku yaala DKMG ah ay bilaabi karaan. "Waxay sheegeen in ay u furi lahaayeen garoonka diyaaradaha ee dibad-baxa. Muxuu sidaas 17 u furan sanado? Madaarkaani ma noqon karo maalgelin doorasho. Wali waa maalgelin aan dawli ahayn. Waa in isla markiiba la isticmaalo. Zonguldak 17 ayaa la joojiyay sanado badan. Waddooyinka waawayn waa la dabiici karaa, jidadka tareenadu wuu xiran yahay, baddana lama isticmaali karo. "
Baabuurta Kabaha Baabi'iya waxay la imaanaysaa Calanka iyo Badda
Badda Madadaalka Badda iyo Baltic
Badda Caspian waxay noqon doontaa casiirka maraakiibta maraakiibta
Tareenka gawaarida gawaarida ee Channel-ka ayaa kor u kacay
CHP Gürer, "Ma jirto garoon diyaaradeed ama tareenka xawaaraha sare ah Nigde"
Madaarka Zonguldak Caycuma
Gaadiidka bilaashka ah haddii aad ku leedahay dibad-baxa Kocaeli